အွန်လိုင်းတွေမှာဈေးရောင်းကြည့်ရအောင်! အပိုင်း(၁) - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Posted by Ko Nge on November 30, 2012 at 9:30am
အွန်လိုင်းပေါ်က မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝတ်လ်ဆိုဒ်တွေမှာဈေးရောင်းပြီး ၀င်ငွေရှာလ်ို့ရတဲ့ဝတ်လ်ဒီဇိုင်းဆိုဒ်လေးပါ၊
အခုမှရှာတွေ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝတ်လ်ဆိုဒ် တွေမှာ ဈေးရောင်းလို့ရတဲ့ဝတ်လ် ဒီဇိုင်းအသစ်စမ်းပြီး ရေးကြည့် နေတာပါ၊ နာမည်ကြီး yahoo က ပေးထားတဲ့ဝတ်လ်ဒီဇိုင်းဆိုဒ်လေးပါ ၊ ဘာမှအချောမသတ်ရသေးပါဘူး၊စမ်းပြီးရေးကြည့်နေတာဘဲရှိပါသေး တယ်၊ တော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်၊
အပျော်တမ်း (သို့) ကြေးစားအဆင့်ထိရေးလို့ရတဲ့ ၀တ်လ်ဒီဇိုင်းဆိုဒ်လေးပါပဲ၊ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ဖလက်ပလေရာတွေပေးထားပါတယ်၊ အဆင်သင့်ဝတ်လ်ဒီဇိုင်းတွေရေးဆွဲပေးထားပြီး မိမိကြိုက်နှစ်တာတွေကိုရွှေးပြီးဝင်ရေးရုံပါဘဲ၊ တအားလွယ်ကူတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊ သူက (၂)မျိုးပေးထား ပါတယ်၊ Free နှင့် Premium ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်၊
(၁) ဖရီးပေးထားတာက ကျော်ငြာတဲ့ပုံစံတွေလောက်ဘဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်၊
(၂) မိမိကိုယ်ပိုင်အမည်နှင့်ဈေးရောင်းချင်ရင်တော့ပိုကောင်းတဲ့ eCommerce ပါတဲ့ all premium package benefit နှစ်စဉ်ကြေးပိုက်ဆံပေးဝယ်ရင် ဈေးရောင်းလို့ရအောင်ငွေကြေးနှင့်ဆိုင်တဲ့ Paypal, Master, Visa စသည့်ဘဏ်ကိစ္စတွေအပြည့်စုံပါတဲ့ဝတ်လ်ဆိုဒ်လေးရပါတယ်၊ ဘယ်လိုယူလဲဆိုတာ အောက်ကပုံတွေနှင့်စာကိုဖတ် ကြည့်လိုက်ပါနော်!
ဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါအုံး.......GIFT ME! >>လင့်ကလေးက.... My Life Choice!
WIX IS GIVING AWAY
Simply Upgrade your Wix site toaYearly Combo/Unlimited/eCommerce package and receive all of the following:
Free $50 Voucher for Facebook Advertising,
$75 Gift Voucher to Advertise on Google,
Free Domain for 1 Year,
and all premium package benefit>>
GIFT ME! >>
ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအုံးစမ်းကြည့်ထားတဲ့ ၀တ်လ်ဆိုဒ်အသစ်လေး ဘယ်လိုနေလို့! အကုန်မပါသေးပါဘူး
စမ်းတ၀ါးဝါးနှင့်စမ်းကြည့်ထားရုံဘဲရှိပါသေးတယ်၊ Link...My life choice
ဒီလိုင်းက အွန်လိုင်းကျော်ငြာအကျိုးတော်ဆောင်တွေ လုပ်စားနေတဲ့လိုင်းဝတ်လ်ဆိုဒ်လေးပါဘဲ!
Setting up shop is easy!
Add Wix eCommerce and start selling online in minutes
- Easily addashopping cart to your Wix sites
- Easy to manage and update
- Your own domain, no Wix ads, Google Analytics
- Get paid directly to your PayPal account
- We dont takeacent of your sales!
- No tech skills necessary
However, if your website belongs to one of the following fields of expertise, then for better results please choose the relevant URL below:
Create Your Free Websit : Chooseadesign. Customize it with ease. Publish online instantly
Photography : Photographer, MakeaStunning Portfolio Website with
Templates : Create your Stunning Looking Website today!
Over 21,120,019 Sites Created So Far! ChooseaTemplate and make it yours.
Graphic Designers :Create STUNNING sites for you or your clients! Simple, easy & FREE.
အဲ! ဘာမှာမလုပ်ချင်ရင်တော့ စိတ်ဝင်စားရင် ကျော်ငြာတွေလက်ခံအပ်လို့ရပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် မိမိကိုယ်ပိုင် ၀တ်လ်ဆိုဒ်လေးလိုချင်ရင်တဲ့သူတွေကို ရေးဆွဲပေးလို့ရပါတယ်၊ လိုချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ အချက်အလက်တွေအကုန်ပေးမှရေးလို့ရတာပါ၊ ဟဲဟဲ! ကြိုက်လို့ရှိရင်ရှယ်နိုင်ပါတယ်နော်!
လင့်လေးကတော့.........GIFT ME! >> Link.... My Life Choice!
Tags: စီးပွားရေး, နည်းပညာ, ငွေကြေး Like0members like this